Barnaamijka Best in Edit Video Flip
Sida loo Edit Video Flip
> Resource > Video > Sida loo Edit Flip Video
Ma waxaa jira si kastaba in xaalkaa Flip videos fiican markaas Flipshare? Flipshare waa wax xun in wax ka bedel videos leh, iyo Windows Movie Kan sameeyey inaysan ii ogolaaneynin inaan ku geliyaan Flip videos. Ma jiraan wax barnaamijyo ka wanaagsan waxaa si ay u xaliyaan aan dhibaato?
-Kevin Smith ka Yahoo Jawaab
Waxaa laga yaabaa in aad sidoo kale soo food saartay dhibaato la mid ah, laakiin aad tahay mid aad u nasiib badan tahay in la helo awood iyo dareen flip video editor halkan: Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor) ( Filmroa u Mac (Originally Wondershare Video Editor for Mac) ). Qalab video Tani jeedsadaa oo dhan adag iyo wakhti-comsuming shaqada tafatirka hawlaha fudud oo aasaasi ah. Qalabka tafatirka ayaa kaliya soo haan marka aad rabto in aad ka dhaqaajiyo clips loo baahnayn iyadoo kuwa kale, isku shaandheyn u socoto 90 degress ama anti-bilow dhanka, dalban filtarrada muuqaal cajiib ah, isbeddel mug, codka, qabsato dhalaalka, ka duwan, iyo in ka badan. Hoos waxaa ku qoran ayaa muujinaya sida aad edit karaa oo kor flip video hab cusub oo dhalaalaya.
Download iyo gashato flip video tafatir ah sida nidaamka hawl gal. Waxaa Orod dib markii la rakibey. Hoos hage qaadataa version daaqadaha sida tusaale ahaan ka.
1 dejinta flip videos aad
Guji "Import" in ay ku shuban flip videos ka your computer, ama jiidi oo iyaga hoos u User ee Album. Dhammaan files laga keeno lagu soo bandhigi doonaa thumbnails on shayga saxaarad bidix oo aad ku arki kartaa on suuqa kala screen midig. Haddii loo baahdo, waxaad riixi kartaa icon screen-buuxa si ay u helaan waayo aragnimo daawashada fiican, iyo qaadan snapshots si xor ah goobaha aad ugu jeceshahay.
2 Edit iyo shakhsiyeeyo flip video clips
Jiid files ka User ee Ulbum in Timeline Video for tafatir ah:
Qalabka tafatirka aasaasiga ah: goo, Dalag, isku beddesha, Dheellitir dhalaalka / barbardhigo / Saturation, Calan Fast / gaabis ah xawaaraha ciyaareed, cod Change, mugga, garoonka, iwm Just doulce guji video clip in ay arbushin ilaa guddi tafatir ah.
In kor loo qaado video la saamaynta midabo: Jiid jeedi template aad jeceshahay ka 300+ cabsi badan horyaalka, intros / credits, kala guurka iyo dheeraad ah u astaysto si ay u gaar ah.
Advanced video tafatirka: Ku jiid dhowr sawiro / videos in mid ka mid video jir inaad u sheegto threads ka badan sheekadaada. (Habkaani kaliya availble in version Windows).
3 Fun video tafatirka (Ikhtiyaar)
Midig u guji wax flip clip on Timeline dooro "Power Tools". Daaqadda pop-up ka, oo aad qaadi karto si aad video heerka ku xiga ee ay codsanaya "Janjeeri-wareeg", "Muuse", "Waji-off", "Jump jarid" si aad video. Astaamahani waa qaar aad waxtar leh si aad u gaarka ah video oo soo jiidasho leh.
4 Save iyo wadaagaan abuurkiinna
Marka aad ku qanacsan tahay waddada tooska ah ee video final, aad tallaabada final adigoo gujinaya "Abuur" button. Daaqadda saarka of this video flip Tifaftiraha, aad leedahay fursado badan si uu u badbaadiyo video.
Save si qaabab leh tayo sare leh: Ku dhowaad dhammaan qaabab loo jecel yahay waxaa laga heli karaa si ay u soo qaado, oo ay ku jiraan AVI, MOV, wmv, MKV, MPEG, MP4, iwm
Play on kombuyuutarrada gacanta, Halkan, waxaad samayn kartaa qaab filaayo in aad iPhone, iPad, Samsung Galaxy, PSP, Madaxweyne Siilaanyo, oo dheeraad ah oo loo maqli karo qaab ciyaareedka ugu fiican.
Share in YouTube iyo Facebook, Waxaad samaysataa YouTube qaab socon for uploading si toos ah uga this video editor waddada tooska ah.
Guba Flip video inay DVD: Beddelaan aad uugu qorto video inay DVD. warbaahinta, DVD disk, file image ISO u cozily dib arkaysid on TV.
Sida loo Edit Lugood Videos
Sida loo Guba Flip fiidiyo Videos in DVD
Qof kasta oo ka dhigi kara lacag la Videos iyo Photos [Infographic]
Sida loo Edit 4K Duuban in Adobe jilitaankii
Sida loo hagaajiyo tayada Video
Sida loo dar Album Art in MP3 on Mac
Video Kan sameeyey Movie for Windows 8: Si fudud Samee Video Movie
Sida loo kala sooco Audio ka Video
Sida loo soo dejinta fiidiyo Videos in Sony Vegas